शिक्षामन्त्री पोखरेलका कारण गाेविन्द केसी र सरकारबीच वार्ता बि’थोलियो – Gandaki Chhadke
शिक्षामन्त्री पोखरेलका कारण गाेविन्द केसी र सरकारबीच वार्ता बि’थोलियो
By गण्डकी छड्के Last updated Oct 10, 2020
काठमाडौं : चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग राख्दै २६ दिनदेखि अ’नसनरत डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच शुक्रबार बेलुकी भएको वा’र्ता बि’थोलिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले दुवै पक्षका वा’र्ता टोलीबीच भएको सहमति न’मानेका कारण साँझ ९ बजेदेखि सिंहदरबारमा भएको वार्ता स्थ’गित भएको हो। वार्ता टोलीले तयार पारेको सहमतिको म’स्यौदामा शिक्षामन्त्री पोखरेलले आपत्ति जनाएका थिए। उनले दुई पक्षबीच भएको स’हमतिको म’स्यौदा नै सं’शोधन गर्दै चिकित्सा ऐ’न सं’शोधनबारे डा. केसीसँग भएको सहमतिको मिति राख्न नचाहेका र नयाँ स’हमतिलाई क्याबिनेट बैठकमा लैजान उल्लेखित बुँदा ह’टाएका स्रोतले जानकारी दियो।
त्यसपछि हिँडेका मन्त्री पोखरेल सरकारी वार्ता टो’लीसँगै सम्पर्कमा आएनन्। डा. केसी ६ बुँ’दे मा’ग राखेर अ’नसनरत छन्‌। माग पूरा गराउन केसी र सरकारी पक्षबीच बिहीबार दिनभर पनि वार्ता भएको थियो। सो वार्ताका क्रममा दुवै पक्ष स’हमतिमा जु’ट्ने प’क्कापक्की भएपछि शुक्रबार पुन: वार्तामा बसेका थिए। सहमतिको म’स्यौदा बिहीबार नै तयार भएको थियो। सो म’स्यौदा शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि बु’झाएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिको सोही म’स्यौदालाई औपचारिकता दिई शुक्रबार नै केसीको अ’नसन तो’डाउन भनेपछि केसी र सरकारी पक्षका वार्ता टो’ली तयारी अवस्थामा बसेका थिए।
शुक्रबार बेलुकी दुई पक्षबीच भएको सहमति शिक्षा सचिव मैनालीले विभागीय मन्त्री पोखरेललाई देखाएका थिए। औपचारिकता दिन सहमति देखाएपनि मन्त्री पोखरेलले वार्ता नै भाँ’डिने गरी सहमतिको म’स्यौदा नै हे’रफेर गरिदिएका हुन्‌। डा. केसीका तर्फबाट वा’र्ता टो’लीका संयोजक जीवन क्षेत्रीले शिक्षामन्त्री पोखरेलबाट दु’राशय राख्ने काम भएको र अनसनरत डा. केसीको जीवनप्रति सं’वेदनशील नदेखिएको बताएका छन्‌। भइसकेको समझदारीबाट सरकार पछि ह’टेकाले अब सो’लिडारिटी फर डा. केसी र ने’पाल चिकित्सक सं’घ लगायत फो’रमले आ’न्दोलनलाई थप क’डा बनाउने उनको भनाई छ। थाहा खबर